डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
जगदीशचन्द्र पोखरेल सन् १९५३ मा तनहुँ जिल्लाको राम्चे गाउँमा जन्मिएका हुन् । युनिभसिटी अफ हवाई, अमेरिकाबाट रिजनल डेभलपमेण्ट प्लानिङमा स्नातकोत्तर गरेका पोखरेलले अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स इन्षिटच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी)बाट सोही विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
प्रारम्भिक शिक्षा नेपालमै लिएका उनले आईएससी भारतको वनारसबाट गरेका हुन् । उनले ग्रीस सरकारको छात्रवृत्तिमा आर्किटेक्चरल इञ्जिनीयरिङमा ब्याचलस गरेका छन् । करीब १२ वर्षइञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा प्राध्यापन गरेका पोखरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगमा करीब ५ वर्षसदस्य र दुईपटक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले विश्व बैङक, एडीबीलगायत संस्थामा कन्सल्टयाण्ट र एडभाइजरसमेत भएर काम गरेका छन् ।
सङ्क्रमणकालमा नेपालको विकास
नेपाल विकासको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सँघारमा उभिएको छ । मानव विकासका परिसूचकले सकारात्मक उपलब्धिलाई नै देखाउँछन् । तर, आर्थिक विकास (वृद्धि)को दर भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर अझै पनि उच्च छ तर प्रजननदर घट्दो छ । क्षेत्र, गाउँ, शहर सबैतिर अति विपन्न र सम्पन्नबीचको दूरी अझै पनि फराकिलो रहेको छ ।
सन् २०१५ मा समाप्त हुने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका दुईओटा लक्ष्यबाहेक अरु सबै पूरा हुने सम्भावना छ । समग्रमा हाल राखिएको अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य सम्भव हुने देखिन्छ । यसका लागि मुख्य बाधक आर्थिक वृद्धिको न्यून गति नै हो । यसका लागि केही गर्नैपर्ने कुरा छन् । त्यसका लागि समग्र राष्ट्रिय सोच केन्द्रित हुन जरुरी छ । समृद्धिका लागि सबैका बीचमा सहमति हुन आवश्यक छ । विप्रेषण हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको छ । यसको वृद्धि, सही परिचालन र उपयोगको आवश्यकता छ ।
अहिले हाम्रो मुलुकका काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति प्रत्येक दिन सयौंको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन् । यो देशको आर्थिक विकासका लागि राम्रो होइन तर पनि यसबाट हुने राष्ट्रिय आम्दानीको सानो हिस्सा रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दा राष्ट्रलाई ठूलो लाभ हुन सक्छ । समयअनुसार विदेशिएका युवा केही दक्षता र केही पूँजी लिएर भित्रिनेक्रम शुरु भएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको छ । यद्यपि यसतर्फ केही स्वत:स्फूर्त प्रयासहरु भएका पनि छन् । यिनलाई प्रोत्साहित गर्दै अझ व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुलाई देशभित्र नै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूँजी र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । शान्तिसुरक्षा लगानीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । धन कमाउनु अपराध होइन । तर, गैर कानूनीरुपमा कमाएको धनमात्र होइन, सबै काम अपराध हो भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ ।
सरकारले लगानीको वातावरण सृजना गर्न केही काम गर्नुपर्छ । यी कामहरु देशले राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट निकास पाएपछि गर्नुपर्ने आफ्नै प्रकारका छन् । त्यसैगरी सङ्क्रमणकालमा गर्नुपर्ने पनि केही नीतिगत कुरा छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सधैं तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनु हो । दोस्रो, लगानीका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिहरु राजनीतिक सहमतिको आधारमा बनाउनुपर्छ । तेस्रो, राष्ट्र बैङ्कजस्ता संस्थाले नीतिनिर्माण गर्दा राम्रो गृहकार्य गरेर पूर्ण तयारीका साथ ल्याउनुपर्छ । छिटोछिटो निर्णयपरिवर्तन गर्दा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन । यी संस्था नियन्त्रक मात्र नभएर संरक्षक पनि भएकाले यिनले सकेसम्म संरक्षकको भूमिका निभाउनुपर्छ । चौथो, राज्यले शुरु गरेको सुधार (रिफर्म)को एजेण्डालाई बढाउँदै विगतका उपलब्धिलाई संरक्षण र सशक्त बनाउनमा जोड दिनुपर्छ । सङ्क्रमणकालमा ठूलाठूला परिवर्तन गर्ने योजना बनाउनु हुँदैन ।
त्यसैगरी राज्यशक्ति र राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्ट्राचारलाई संस्थागतरुपमा निरूत्साही र निर्मूल पार्ने र त्यसको अनुभूति जनतालई दिने काम गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र निजीक्षेत्रले सरकारसँगको सहकार्यलाई नाराका रुपमा मात्र विकास नगरेर त्यसलाई स्पष्ट कार्यका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यिनीहरुको भूमिकाबारे सरकारमा द्विविधा राख्नु हुँदैन । यसका साथसाथै उनीहरुले पनि सोहीअनुसार सरकारलाई सघाउने काम गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्र राज्यको सहकारी हो भन्ने सोच राख्नुपर्छ ।
समग्रमा हेर्नेहो भने द्वन्द्वको बेलामा समेत ध्वस्त नभएको नेपालको अर्थतन्त्रको जग बलियो रहेको छ भन्न सकिन्छ । लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा समेत राष्ट्र पूर्णरुपमा असफल हुनबाट जोगियो भने आगामी दिनमा हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाएर लैजान सक्ने प्रसस्त सम्भावना छन् । यसलाई खलबलिन नदिन केही तत्कालीन र केही दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने नीतिहरु लागू गर्नुपर्छ । यसरी आगामी ५-७ वर्षमा लगातार ६-७ प्रतिशत जति आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसकेमा नेपाल यसै दशकभित्र विकासशील राष्ट्र बन्न सक्छ । यसका लागि केही समस्या र चुनौती पनि नभएका होइनन् । तर पनि, हामीले थुप्रै गर्नसक्ने सम्भावना छ । यी सम्भावनालाई पूर्ण प्रयोग गर्नेतर्फसबैको ध्यान जान जरुरी छ । दुई छिमेकी राष्ट्रहरु विश्वकै उच्च आर्थिक विकास हासिल गरिरहेको अवस्थामा अविकसित नेपाल रहिरहन सक्दैन । यो नेपालका लागि र छिमेकीका लागि समेत स्वीकार्य हुँदैन ।